के हो Black Box ?
हवाइजहाज दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणको नाम नै Black Box हो । यसले हवाइजहाजको उडानको तथ्याङ्क स्थिति, गति, उचाई आदिको बारेमा रेकर्ड गर्दछ जसबाट दुर्घटना भएमा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो हल्का पहेंलो रङको हुन्छ , यो आगो, पानी र ठक्करबाट पूर्ण सुरक्षित हुन्छ । यसमा FDR अर्थात Flight Data Recorder र CVR अर्थात Cockpit Voice Recorder दुइ उपकरणहरु जडान गरिएका हुन्छन् ।
2 गुरिल्ला ट्रेक
4 जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?
7 Career News and Info जेठ ९, २०७४